ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၇) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၇)
ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၁၇)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Apr 11, 2013 in Creative Writing, Photography, Travel | 20 comments
အင်းလေး၊ တောင်ကြီး ခရီးစဉ်
အင်း နက်ဖြန်သဘက်ဆိုရင် သင်္ကြေ၇ာက်ပီ.. ရွာသားတွေဘာအစီအစဉ်တွေရှိလဲတော့မသိဘူး.. ဟက်ပီးနူးရီးယားကို ဒီပို့စ်လေးတင်ပြီး နှုတ်ဆက် လိုက်ပါတယ်ဗျို့..
အင်း.. ၄ ခေါက်မြောက် တောင်ကြီး အင်းလေး ခရီးစဉ်ပေါ့ဗျာ.. အံစာတုံးတို့ တို့လဲ အပါအ၀င် ၁၂ လပိုင်း ၂၀၁၂ တုန်းက ရုံးအဖွဲ့နဲ့သွားတဲ့ ခရီးစဉ်ပေါ့.. စာလဲသိပ်မရေးချင်ဘူး ပြင်းနေတာနဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကလဲ ရုံးမှာတောင် စုတ်ပြတ်သတ် ဖွတ်သရတ်ညက် နေလို့ မတင်ဖြစ်တာတောင် တော်တော်ကြာသွားတာနဲ့ ရှာကြံပြီး ကြွားလိုက်ရပါဂျောင်း
ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်သေတွေကတော့ ပင်းတရ၊ အောင်ဘန်း၊ အင်းလေး၊ ထမ့်စမ်း၊ ကက္ကူ၊ ကလော တို့မှာ ရိုက်လာတဲ့ ဓာတ်သေတွေဖြစ်ပါတယ်..
၁။ ပင်းတယ လမ်းက ပန်းတစ်ပွင့်
ပင်းတယကနေ အောင်ဘန်းကို အပြန်မှာ ကားနဲ့ လိုက်မပြန်တော့ဘဲ ဆိုင်ကယ်ငှားစီးပြီး ရိုက်လာတဲ့ ပုံလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်..
နေအ၀င်မှာ နောက်ဆုံး ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးပါ.. ကုန်းတက် မှာ ဖြတ်နေတဲ့ လှည်းတန်း ကို တွေ့တာနဲ့ စောင့်ြ့ပီး ရိုက်ဖြစ်တယ်.. နေ၀င်သွားတာကို မမှီလိုက်မှာ စိုးလို့ လမ်းဘေး ခြေချော်ပြီး လဲကျတာတောင် မထဖြစ်ပဲ အသည်းသန်ရိုက်ယူခဲ့ရတဲ့ ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်..
အောင်ဘန်းက view point hotel ကို ညနေ ၆:၃၀ လောက်ရောက်တယ်။ အေးချက်ကတော့ ပက်စက်သလားမမေးနဲ့ ဗျို့ .. နောက်နေ့တောင်ကြီး၊ ညောင်ရွှေမှာ တောင် အဲဒီလောက်မအေးဘူး.. ညအိပ်ပြီး မနက် ဈေးနေ့ဆိုလို့ ၄:၃၀ နိုးတယ် .. အပြင်ထွက်မလို့ ကို ၃ ခါတိတိ ကြိုးစားပြီး ၅ : ၃၀ လောက်မှာ ဈေးကိုသွား ကြည့်တယ်.. ဈေးဖွင့်မဲ့ သူက အဲဒီတော့မှ ထော်လာဂျီနဲ့ ရောက်လာတာတယ်.. အဲဒါနဲ့ လမ်းမှာ တွေ့တာလေးပဲ ရိုက်ပြီး ဟိုတယ် ပြန်လိုက်တယ်..
၆။ Small Friend
အောင်ဘန်းကနေ မနက် ထွက်လာပြီး အင်းလေးကို ၀င်တယ်.. အင်းထဲမှာ လိုက်ရိုက်ဖြစ်တယ်။
၁၁။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲ
ဖောင်တော်ဦးကနေ အင်းတိန်ကို သွားတယ် အင်းတိန်မှာ တွေ့လိုက်ရတာက စေတီတွေ တော်တော်များများ ကို ပြင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်.. အရင်က စေတီ အပျက်တွေ နေရာမှာ စေတီ အသစ်တွေ ဖြစ်နေပါင်္ပြီ။ မပြင်ရသေးတာတွေပဲ ကျန်ပါတော့တယ်..
အင်းတိန်ကအပြန်မှာ ခြံထဲကို ၀င်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်.. စက်လှေဝင်လို့မရတာကြောင့် လာတဲ့ လှေကလေးတစ် စီးကို အကူ အညီ တောင်းရင် ၀င်ရိုက်ပါတယ်.. ယာရှင် ကလဲ တော်တော် သဘောကောင်းပါတယ်.. သူတို့ တဲလေးပေါ်ကို လဲတက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်..
ီဒီလှေကလေးနဲ့ ၀င်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်.. အလယ်ကတော့ လေဒီ အုတ်ပေါ့ဗျာ.
ဒီပုံလဲ ရိုက်ပြီးရော ပြဿနာ အကြီးအကျယ်တတ်တော့တာ ပါပဲ။ သူငယ်ချင်းက ရိုက်ပေးနေတုန်း 8Gb ကတ်က ပြည့်သွားတယ်.. အဲဒါနေ့ 4GB ကတ်ကိုထုတ်လိုက် ပြီး ကိုက်ထားလိုက်တယ်.. 4Gb ကတ်က ကလော၊ ပင်းတယမှာ ရိုက်ပြီး ပြည့်လို့ ကွန်ပြူတာထဲကို ကူးထဲ့ပြီးသားကတ်.. စိတ်ကူးက 8GB ကိုထုတ်ပြီး 4GB ကိုထဲ့ format ချ ပြီး ဆက်ရိုက်ဖို့.. ဒါပေမယ့် တကယ်လုပ်လိုက်တယက ကတ်မလဲပဲ format ချပစ်လိုက်တယ်.. ပြီးလို့ ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုတော့မှ ပါးစပ်မှာ ကိုက်ထားတဲ့ ကတ်ကို သတိရတယ် .. ကြည့်လိုက်တော့ format ချရမဲ့ ကတ်.. တကယ်ချလိုက်တာက သိမ်းရမယ့် 8GB ကတ်.. ကိုယ့်နဖူးကိုယ်ရိုက်ပြီး သေသာ သေလိုက်ချင်တော့ တယ်ဗျိူ့.. recovery ပြန်လုပ်လို့ရတာ သိပေမယ့် တခါတလေ အကုန်ပြန်မရတတ်တာ ရှိတတ်တော့ တော်တော်လေး စိတ်လေသွားတယ်.. ပင်းတယ အပြန် အပေါ်က ပုံ (၂ )ကစပြီး ပါတယ်ဆိုတော့ သဲထဲေ၇သွန် ဖြစ်ပါပြီ ဆိုပြီး ဆက်တော်မရိုက်နိုင်တော့ဘဲ ပြန်ခဲ့တယ်.. လမ်းရောက်တော့ ပြန်ရိုက်ပါဦးမယ်ဆို ရိုက်ပေမယ့် စ်ိတ်က မပါတော့ဘူး.. ဒီကြားထဲ စက်လှေမောင်းတဲ့သူက ဆက်မမောင်းမပေးချင်သလို လုပ်နေလို့ ပြဿနာ တက်သေးတယ်.. အဆင်မပြေပုံများတော့..
နောက်နေ့ တောင်ကြီးတက်.. တောင်ကြီးကနေထမ့်စမ်းသွားပေါ့ဗျာ.. ထမ့်စမ်းမှာ အလှူကြွေးနေတဲ့ ပအိုဝ်တွေ တွေတယ်.. ထမင်းကို ရွှေဖရုံသီးနဲ့.. ပြန်လာရင် ၀င်တွယ် မယ်ဆိုတာကို ဂူထဲမှာ ကြာသွားတာနဲ့ မတွယ် လိုက်ရဘူးဗျာ.. အဲ လေဒီအုတ်ကတော့ လင်တော်မောင်အတွက် ပါရမီ ဖြည့်ပေးရှာတယ်.. သူဝင်အုပ် လိုက်တယ်တဲ့လေ..
၁၅။ ထမ့်စမ်းမှာ လုပ်နေတဲ့ အလှူ
ထမ့်စမ်းက ပြန်ရောက်ပြီး တောင်ကြီး မှာအိပ်. နောက်နေ့ မနက် ၁၀ လောက် ကက္ကူကသွားကြတယ်.. ဓာတ်ပုံက 8Gb ကို ထပ်မရိုက်ရဲတော့ တာနဲ့ ဒီအတိုင်းထားပြီး 4GB လေးကိုပဲ ပြန်ရောက်တဲ့ အထိခြွေရိုက်လာခဲ့ရတယ်.
၁။ ပင်းတယ လမ်းက ပန်းတစ်ပွင့်…
နေ၀င်သွားတာကို မမှီလိုက်မှာ စိုးလို့ ချောလဲ ရောထိုင် ရိုက်ခဲ့တဲ့…၄။ အိမ်ပြန်ချိန်…
ပုံလေးတွေ အကုန်လှ အကုန်ကြိုက် ဒါနဲ့ ဦးအုပ် လှော်နေတဲ့ ပုံအရ လှေက ရှေ့ရော ရောက်ရဲ့လားဟင်
ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီလိုပဲ ဟိ
အသင်းက ခဏလာခဲ့ပါဦးတဲ့ . . ဟိ။
ပုံလေးတွေက ပန်းချီ ကားလေးတွေ ကြနေတာပဲ ..
ပထမတစ်ခေါက်သွားတုန်းက ပုံတွေ စိတ်တိုင်းမကျလို့ ပြန်ရိုက်ချင်တာ။
ဒါပေမယ့် ကျနော်က ဆရာအုပ်လို့ လူပုံ မရိုက်တတ်ဘူးဗျ။
သက့်မဲ့ ဘဲ ဆော်တတ်တာ။
ဥပေါက်က သက်မဲ့ကို ဆော်တာလား ခွိခွိ
ဟိတ်လူ . . ခင်ဗျားကို လုံးဝ မနာလိုတော့ဘူးနော်. . . ကျုပ်မှာတော့ . . . . အနှီးတွေ၊ ဂွမ်းတွေ၊ ဆန်ကွဲ ခေါင်းအုံးတွေ၊ ဆပ်ပြာတွေ၊ သူနာပြု တွေကြားမှာ တူတူရေ ၀ါး နေရတာ . . ခင်ဗျား မတော့ . . ထွက်လိုက်တဲ့ ခရီး၊ ရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံ . . . . . .။ ဒီနှစ် သင်္ကြန်တော့ ကျုပ် လဲ ပုံရအောင် ရိုက်မယ် စိတ်ကူးထားတယ်။ WaterProof Casing ၀ယ်မရတော့လဲ . . . . . ကြွတ်ကြွတ်အိတ် ပတ်ပြီးရိုက်မယ်ဗျာ . . ဘုရားဖူး ကိုကြိုက်တယ် . . . . .ဒါပေသိ . . ခင်ဗျားကြီး (ကျုပ်ထက် ၉ နှစ်လောက်ကြီးလို့) ဖွက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ကိုပိုကြိုက်တယ် လို့ ပြောလိုက်မယ်။ ဒါဗြဲ ……….။
ခင်ဗျားတို့က အပူရှာချင်ကြတာကိုးဗျ (ဘိန်းစားချင်းအတူတူ)
ပုံတွေက ကြွားချင်တာနဲ့ ကုန်ပါပြီဗျာ
အော် ဒီနေ့ည ပုဂံသွားပြီး သဘက်ခါ ငပလီ ဂိုးမလို့ဗျ ဟီးဟီး
ဆြာအုပ် ….ပုံတွေကလှလွန်းလို့ အားကျပါအိ။
ကျမဖတ်မိတဲ့ ဆြာအုပ် ပို့စ်တိုင်းလိုလိုမှာ ဒီ 4GB ပြသနာအကြောင်း အမြဲတွေ့နေရတာ အနည်းဆုံး ၃-၄ခါရှိပြီ။ သဂျီးဆီက 32GB ကဒ်လေးများ အကြောင်းရှာပြီး တောင်းဖို့ စိတ်မကူးမိဘူးလား။ နှစ်ပတ်လည် တွေ့ဆုံပွဲတုန်းက မှတ်တမ်းတင်ခ ဘာညာကွိကွပေါ့။
32GB တစ်ကဒ် ၊ 8/16GB backup တစ်ကဒ်ဆို ပူစရာမလိုတော့ဘူး။ SD ဆိုရင်ဈေးပေါပါတယ်။ CF ဆိုရင်တော့ ဈေးပိုကြီးပေမဲ့ 32GB ကစိတ်သက်သာရတာတန်တယ်။ RAW ၁၀၀၀လောက် အသာလေးပဲ။
ဒါပေမယ့် 32 Gb ၀ယ်ပီးပြီဗျ
ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုး နောက်တခါ မကြုံရလောက်တော့ပါဘူး
၃၂ (မိုက်ခရို) ကဒ်တခု( ဆယ်လ်ဖုံးထဲလည်းသုံးလို့ရအောင်) လက်ဆောင်ပေးမယ်..။
ဆုရတဲ့သူကို.. ကိုရင့်ကဒ်အဟောင်းတွေ (ပုံတွေမဖျက်ပဲ) ဆုချလိုက်..
သဂျီး ၀ယ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အခု ဈေးကောင်းတုန်း ၀ယ်ထားချင်ရင် ဒီမှာ
32G class10 SDHC ကို $17, free shipping
အရင်ပွဲတုန်းက မီမိုရီ ကတ်ပေးပါဆို အနော့ကို စတစ်တွေပဲပေးလို့
ရွာထဲ.. ဓါတ်ပုံပြပွဲ/ပြိုင်ပွဲ ၂ပွဲကိုဦးဆောင်ပြီး ပို့စ်တင်..အကဲဖြတ်.. ဆုပေး.. လုပ်ပေးပါလား..
ခေါင်းစဉ်တခုကို.. “သင်္ကြန်” လို့ပေးချင်တာ…။ မမှီတော့ဘူးလားမသိ…။ :buu:
အဲ မလုပ်ပါနဲ့ ဥကိုင်ရယ်..အကဲတော့ မဖြတ်ပါရစေနဲ့
အနော်သိသလောက်ဆိုရင် .. ကလုလင်တို့၊ ဂီဂီတို့ ဆိုဟုတ်သေး
ပုံ ၁၅ မိုက်တယ် အသက်ဝင်တယ်ဂျာ
ဆရာအုပ် က ဆရာအုပ်ပါဘဲ
ဘယ်လို ထပ်ပြောရမလဲ …
အဲ … ပုံတွေက လန်ထွက်နေတာပဲ …..